Ny fomban-doko amin'ny fanorohana any India | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny fanindrona ny orona, sofina na faritra hafa amin'ny vatana hametrahana firavaka na firavaka dia fomba fanao taloha izay mbola velona mandraka androany. Io fomba fanao io dia niandoha tamin'ny fombafomba fanombohana ny fiainana olon-dehibe ao amin'ny fiaraha-monina misy foko, na dia misy tanjona kanto aza ankehitriny.
Iray amin'ireo firenena izay fanajanonana ny fanindronana an-tsokosoko indrindra dia India. Hatramin'ny fahazazany dia mahazatra ny vehivavy eto amin'ity firenena ity ny manao manindrona orona amin'ny heviny nentim-paharazana na ara-pinoana. Ao amin'ny lahatsoratra manaraka, hianarantsika bebe kokoa momba ny fomban-dravehivavy amin'ny fanindohana any India.
1 Ny niandohan'ity fomba amam-panao ity any India
2 Nahoana ny vehivavy karana no manindrona orona?
3 Ny fanindronana ny orona ao anatin'ny trousseau ampakarina
4 Ary aorian'ny mariazy?
5 Ahoana no anaovanao an'io kavina io amin'ny oronao?
6 Inona avy ireo karazana fanindronan'ny orona?
7 Karazan-tsindrona hafa
8 Avy taiza ny fanindronana?
Ny niandohan'ity fomba amam-panao ity any India
Na dia fitaovana fampiasa be eto amin'ity firenena aziatika ity aza ny tena marina, ny fanaovana kavina amin'ny orona dia fomba amam-panao malaza eo amin'ny mponina ao Moyen Orient. Ohatra, ao amin'ny andininy ao amin'ny Testamenta Taloha dia nangonina izay milaza fa i Abraham, ilay voalohany tamin'ireo patriarka telo tamin'ny fivavahan'ny Jiosy, dia naniraka mpanompo hitady vady ho an'Isaka zanany lahy. Ho fanomezam-pahasoavana ho an'ny ampakarina, dia nanao kavin'orona sy fehin-kibo volamena ilay mpanompo.
Ny mpahay tantara sasany dia mino fa ny silamo no nampiditra ny fomban-drazana nanindrona tany India nandritra ny taonjato faha-XNUMX. Ankehitriny, ny fanindronana an-tsokosoko dia tanterahina any India mihoatra ny toerana rehetra eto ambonin'ny planeta.
Nahoana ny vehivavy karana no manindrona orona?
Eto amin'ity firenena ity, ny orona dia tsy ampahany amin'ny vatan'olombelona noforonina mba hamofona sy hiaina fotsiny, fa io koa dia misy lanjany bebe kokoa. Araka ny fanafody Ayuverdic sy sora-tanana karana mihoatra ny 6.000 taona, ny orona dia mifandray amin'ny fahavokarana sy ny kavina ao aminy miaraka amin'ny rafitry ny fiterahana vehivavy.
Ity fanindronana ity dia malaza amin'ny anarana "nath" any India ary izy io koa dia omena tombony amin'ny fanatsarana ny fahatsapana fofona sy fiarovana bebe kokoa amin'ny areti-nify. Ny anarana hafa voarainy dia "nathni," "koka," ary "laung."
Ny fanindronana ny orona ao anatin'ny trousseau ampakarina
Fantatrao ve fa ny "nath" dia ampahany amin'ny trousseau ampakarina? Izy io dia heverina ho fitaovana manintona indrindra izay azon'ny ampakarina amin'ny fampakaram-badiny satria ny orona dia mino fa mifandray amin'ny fihetsem-po sy ny firaisana ara-nofo.
Amin'ny alin'ny fampakaram-bady dia manao 'nath' ilay ampakarina Indiana. Mirefy 24 santimetatra eo ho eo ity iray ity ary ampifandraisin'ny rojo amin'ny volo. Ny dadatoan'ny renin-drazazavavy na ny lehilahy irery no afaka manome an'io firavaka orona io amin'ny vehivavy ary ny mpampakatra no manala an'io fanindronana io amin'ilay ampakarina ho mariky ny fiafaran'ny maha-virijiny azy. Ny fahazoana "nath" avy amin'ny olon-tsy fantatra dia tsy eken'ny fiaraha-monina ary heverina ho tsy fifehezana.
Ary aorian'ny mariazy?
Any amin'ny faritra sasany any India dia matetika no raisina ho mariky ny firaisana ny Nath ka tsy esorina io raha vao manambady ny vehivavy. Na izany aza, rehefa lasa mpitondratena ny vehivavy dia tsy manao firavaka intsony amin'ny orony.
Na dia tsy nihena toy ny mahazatra aza ny maha-zava-dehibe azy, amin'izao fotoana izao ny vehivavy tokan-tena ary na ny zazavavy aza dia afaka mitafy ireo kavina ireo ho toy ny kojakoja lamaody, izany hoe, tsy misy dikany ara-pinoana na nentin-drazana.
Ahoana no anaovanao an'io kavina io amin'ny oronao?
Raha ny mahazatra dia eo amin'ny valan'ny orona havia no apetraka ny «nath» fa any avaratr'i India sy atsinanana dia mazàna no anaovan'ny vehivavy sasany azy eo am-bavorony. Na ny vehivavy aza dia samy voakaikitra amin'ny vombony amin'ny faritra sasany any atsimon'ny firenena.
Etsy ankilany, amin'ny maha-te hahafanta-javatra, amin'ny fitsaboana Ayurveda dia voalaza fa ny fanindronana ny ilany havia amin'ny orona dia mampihena ny fanaintainan'ny fadimbolana ary manamora ny fiterahana, satria ny orona dia mifandray amin'ireo taovam-pananahana vehivavy.
Inona avy ireo karazana fanindronan'ny orona?
"Nathuri": kavina kely volafotsy na volamena misy vatosoa miorina.
"Laung": manindrona amin'ny endrika fantsika.
«Latkan»: kavina kely misy tapa-boribory boribory izay misy sisiny mihantona avy eo ambanin'ny vatosoa.
"Guchhedar Nath": fantatra amin'ny endriny perla antsoina hoe "Basra Moti", izay sarotra be ihany.
"Pullakku": mitafy mihantona eo anelanelan'ireo vavorona roa izy hanomezam-boninahitra an'i andriamanibavy Parvati.
Ny fisehoan'ny fomba fanaingoana vaovao tato ho ato dia nahatonga ny indostrian'ny fanindronana hitombo haingana ary olona maro no misafidy ireo kojakoja ireo handravaka ny vatany. Tsy ny fanindronan'ny orona ihany fa misy karazana maro hafa toy ny:
Ambony ambony sy ambany: fanindronana nentim-paharazana any Afrika sy Amerika atsimo
Volomaso: natao tany Eropa sy Amerika Avaratra voalohany tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia iray amin'ireo fanindronana maoderina indrindra izay tanterahina.
Septum: peratra misokatra na mihidy izay napetraka ao ambanin'ny septum orona mba hanehoana ny fanidiana ny rivotra hisorohana ny fanahy ratsy hiditra amin'ny vatan'olombelona. Avy amin'i Afrika sy India ary Amerika Atsimo izy io.
Fiteny: fomba fanao mahazatra any amin'ny faritra any Amerika atsimo sy India. Ohatra, ny Maya taloha dia nanindrona ny lelany tamin'ny lanonana ara-pivavahana hanadiovana ny fanahin'izy ireo.
Navel: nanjary nalaza tany Etazonia sy Eropa tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Na izany aza, ny angano sasany dia manondro fa tany Egypta taloha dia efa nisy ny fanaovan'ny tindona navel.
Avy taiza ny fanindronana?
Tsy fantatra mazava izay toerana nahaterahan'ny fanindronana voalohany fa ny fanaovana fanindronana ny vatan'olombelona dia fomba fanao taloha be teo amin'ireo foko taloha izay niely tsikelikely, ka tsy azo atao ny miresaka olona manokana.
Ny fanaovana antsy dia natao tamin'ny dikany hafa mihitsy, na hatsaran-tarehy, fitsaboana, ara-pinoana na ara-tsosialy, toy ny fanalefahana soritr'aretina sasany, mba hanamarihana ny lalan'ny fiainana olon-dehibe na amin'ny fanambadiana. Nandritra ny tantara dia malaza be izy ireo ka tsy mahagaga raha tonga amin'ny androntsika ny fampiasana azy ireo. Saingy, amin'izao fotoana izao dia manana dikany kanto indrindra izy ireo, indrindra ny any Andrefana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny fomban-dravezana amin'ny fanindronana any India
Te-ho ao amin'ilay firenena misy fahavalo aho aloha, Andriamanitra ô, ho eo aho
Faborito dia hoy izy:
Manana loharano amin'ity info ity ve ianao?
Valiny tamin'i Faborito
Ny ain'ny lehilahy any Sparta